Home » Lahatsoratra farany farany » fivoriana » Tongasoa eto amin'ny IMEX America indray andro monja izao
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • fanabeazana • Hospitality Industry • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • Tourism • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Ny ekipan'ny IMEX an-toerana.
Tongasoa indray! Ny Ekipa IMEX eny an-toerana dia mankasitraka ny fiaraha-mientan'ny hetsika ara-barotra iraisam-pirenena izay hivory ao amin'ny IMEX America, hatao amin'ity herinandro ity.
Ao anatin'ny iray andro monja dia hisokatra ao Las Vegas ao amin'ny Helodranon'i Mandalay ny IMEX America.
Ity no 10th fanontana ny hetsika IMEX America izay haharitra ny 9-11 Novambra.
Ity hetsika manan-danja ity dia raisina ho toy ny "fody ho an'ny indostria", ary hetsika iraisam-pirenena voalohany natao tany Amerika taorian'ny nanafoanan'i Etazonia ny fandraràna ny diany iraisam-pirenena.
Ny 9 – 11 novambra izao no hanaovana ny seho any Las Vegas, hialohavan’ny Smart Monday, ampiasain’ny MPI, hatao anio. Fizarana lehibe amin'ny vondrom-piarahamonina hetsika ara-barotra eran-tany no hivondrona hiara-hiasa, hanao raharaham-barotra ary hianatra mandritra ity fotoana lehibe ity ho an'ny sehatra.
Amerika IMEX dia nomena ho toy ny "fodiana ho an'ny indostria,” ary misy antony maro hanaovana fankalazana mandritra ny andro vitsivitsy – tsy ny IMEX America ihany no manana trano vaovao, Mandalay Bay, fa ny andiany faha-10 amin'ny fampisehoana ihany koa.
Ny foto-kevitra IMEX dia natomboka tamin'ny Septambra 2001 niaraka tamin'ny seho voalohany tamin'ny Aprily 2003 tao Frankfurt tao amin'ny efitrano lehibe indrindra ao Messe Frankfurt tamin'ny 2005 ary avy eo nisokatra ny IMEX America tao Las Vegas tamin'ny Oktobra 2011.
Ny fandaharan'asa mpividy fampiantranoana tsy manam-paharoa, rafitra fanendrena an-tserasera, fomba fiasa voalohany amin'ny fandraharahana, ary fomba fiasa fiaraha-miasa no mampiavaka ny IMEX. Ny vinan'ny hetsika dia ny tontolon'ny fandraharahana tsara miampita sisintany ary ahafahan'ny mpanentana sy mpamatsy fihaonana eran-tany mifandray mora foana.
Ny tanjon'ny IMEX dia ny ho mihoatra noho ny mpikarakara fampirantiana. IMEX dia nametraka ny tenany ho ivon'ny indostrian'ny fivoriana, ary namolavola ny sehony mba hanampiana ireo mpandray anjara hianatra, hifandray ary hanao raharaham-barotra. Ny hetsika izay niaraka tamin'ny IMEX hatramin'ny nanombohany dia ahitana ny fandaharan'asan'ny mari-pankasitrahana, Association Focus, ny Future Leaders and Policy (Politika teo aloha) Forums - izay nanatevin-daharana ny hetsika misy ny Exclusively Corporate, She Means Business, ary Smart Monday.
Ny fandaharam-pampianarana IMEX dia nitombo avy amin'ny seminera 30 tamin'ny seho voalohany ho 200-plus isaky ny seho androany. Ny Vondrona IMEX dia niara-niasa tamin'ny mpiara-miombon'antoka mba hamolavola hetsika - ary ireo mpiara-miombon'antoka ireo dia nitondra ny zava-nisehony manokana tamin'ny seho IMEX, nanomboka tamin'ny SITE Nite sy MPI Rendezvous ka hatramin'ny fivorian'ny mpikambana ICCA isan-taona. Ny IMEX dia manohy manatsara ny filaharany amin'ny hetsika rehefa miova sy mitombo ny indostria.
Na dia mety niova aza ny indostria tao anatin'ny folo taona lasa teo ho eo, ny tsy niova dia ny fanirian'ny olona hivondrona. Ny fifandraisana manokana matanjaka ao anatin'ny indostria dia ivon'ny fahombiazan'ny fampisehoana IMEX. Na dia nitombo avo efatra heny aza ny isan'ny mpiasan'ny ekipan'ny IMEX, ny ankamaroan'ny mpisava lalana tany am-boalohany dia mbola anisan'ny ekipa sy ny fianakaviana.